Matanho endarama kuchitoro chako chepamhepo | ECommerce nhau
Matanho endarama kuchitoro chako chepamhepo
Nhasi, vanhu vazhinji vanotsvaga tanga bhizinesi kana chitoro chepamhepoIvo vanotsvaga kudzikama kwekutengesa nemari shoma. Iwo emuno mabhizimusi epanyama, nguva dzose inoda mari yekuwedzera, izvo zvave kutungamira vanhu kuti vafunge nezve ecommerce, kana kuti ndezvipi zvakafanana zvitoro zvepamhepo.
1 Izvo zvaunofanira kuziva usati watanga yako online chitoro
1.1 Wedzera musika wako uye uve nechinangwa
1.2 Interface kana ruzivo rwevashandisi
1.4 Mabatiro evatengi
Izvo zvaunofanira kuziva usati watanga yako online chitoro
Wedzera musika wako uye uve nechinangwa
Usati watanga icommerce yakabudirira iwe unofanirwa kuziva Ndeapi vateereri wauchazotengesera?. Ichokwadi kuti kuburikidza nekutengesa zvemagetsi iwe unosvika kune vanhu vazhinji, zvisinei ichokwadi zvakare kuti iwe unosvika kune vakawanda vateereri izvo chigadzirwa chako chisingafarire.
Interface kana ruzivo rwevashandisi
Sezvo iwe unenge usina chitoro uye vashandisi havazokwanise kusvika kwauri Kuti uone kuti chigadzirwa chako chakanaka, kana uchinyatsoda kuve nechitoro chakaringana online, unofanirwa kuchiita kuti chivimbike uye chigoneke sezvaunogona, nenzira yekuti mutengi anopinda peji rako anyatsodanana newe chigadzirwa.
Usati wavhura ecommerce, iwe unofanirwa kuziva kuti 70% yevanhu nhasi vanobatana kuburikidza nharembozha yavo, iyo inotungamira kune dhizaini yewebhusaiti yako unofanirwa kuve ne inoteerera webhu dhizaini, kuitira kuti vatengi vako vagone kubatana nechitoro chako chero nguva.
Kana iwe uchida kuzvitsaura iwe pachako kubva kune vako vanokwikwidza, chimwe chezvinhu chinokundikana mumakambani mazhinji ndiyo iyo service customer, izvo zvinogona kutungamira kuchokwadi chekuti kana iwe ukapa sevhisi yakaipa nguva yekutanga, iwe unorasikirwa nemutengi iye zvachose.
Bhadhara nyanzvi kukubatsira iwe kugadzira yako interface yakakwana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Marketing » Kutengeswa kweIndaneti » Matanho endarama kuchitoro chako chepamhepo
Ndinoifarira uye ndine yakawanda yekupindirana
Kutarisa kwekutsvaga tekinoroji inoperekedzwa nehungwaru hwekugadzira